Torohevitra ho ana��ny tanora : Ilaina hatrany ny fikirizana eo amina��ny fiainana – fanilo
Torohevitra ho ana��ny tanora : Ilaina hatrany ny fikirizana eo amina��ny fiainana
Raha misy eritreritra hanao zavatra ka tiana hahomby amina��ny zavatra atao. Fadio mandrakariva ny be hataka andro, fa ataovy miaraka amina��ny vava. Azo ambara fa tera-bary tsindrian-tsovoka��alina ianao amina��izay,A� tonga amina��ny maha diavolana��ny fonao. Be ny soa azo avy amina��io... Tahaka ilay Rafotsibe mandevina eranambatry, ka manan-kantenaina, vokatra��io fahazarana notefena taminao io. Tsarovy mandrakariva fa ny fikirizana manao sy manaza-tena amina��izay tian-ko hay dia mampitombo ny talenta ananana. Manatsara koa ny toe-tsaina mampisondrotra amina��ny lalam-piainana misandratra hatrany. Fadio mandrakariva ny manao fakam-boanonoka ka raha tojo vato dia miolaka. Tsy tokony ho kivina��ny asa sarotra sy mafy na dia mora vizana aza. Apetraka mandrakariva fa tsy misy mafy tsy laitrana��ny zoto, ny mafy fanozongozona ary ny mangidy fanandrana. Atao tarigetra eo amina��ny fiainana ny toetrana a�?aviavya�?, mangidy am-boalohany fa mamy kosa, any am-parany. Arakaraka ny fahazarana matetika no mahatsotra sy mahamaivana ny asa iray. Tsarovy mandrakariva, fa ny fikirizana dia miteraka fahazarana mahasoa, izay matetika ahavitan-javatra mora foana naA� ireo heverina fa mananosarotra indrindra aza.
Raha hanatontosa asa maromaro, misy ny sarotra ary misy ny mora. Izay sarotra indrindra no tanteraho voalohany. Vetivety foana ny hahazoanao fikirizana sy herimpo hoenti-manao ny asa mankadiry sy goavana, aoriana kely ao. Misy koa ny hafatra ampitaina tiana hitoetra amintsika tanora, aza mihaino vavana��olona sy ny hevitra��ireo mpanatsatso no alaina eo amina��ny fiainana. Tsarovy mandrakariva fa ny fahasarotan-kenatra ateraka��izany, fositra ho ana��ireo izay manana azy, fa tsy ho ana��ireo izay mahatonga azy akory. Samy manana ny zava-manambina ho an'ny tenanyA� ny tsirairay. Koa aza ny fahombiazana��ny hafa no tsiriritina fa izay kely ho ana��ny tena, tsy maintsy ikezahana araka izay tratra, mba hisiana��ny fahalavorariana. ManA�na toetra sariaka lalandava eo amina��ny fiatrehana ny asa atao. Ireo olona monto-dava matetika, tsy mahatontosa firy ny asa tanterahiny. Ilaina ny fianarana teoria tany an-tsekoly fa mila ampiharina amina��ny fiainana ireny raha tianao ny hiteraka fahombiazana sy hiakatra amina��ny ambonimbony kokoa eo amina��ny izay atao.
Ambioka antoky ny hoavy ny tanora
Ny ana-dray aman-dreny, hoy ny Ntaolo, tahaka ny tsipaka��ombalahy, raha tsy mahavoa mahafanina, raha mahavoa mahafaty. Isika samy tanora anefa no hifanoro sy hifananatra eto ka heverina fa tsy hahafanina sy hahafaty. Ametraka azy ity izahay mba hahafahantsika hitsinjo ny hoavy mamiratra ho an'i Madagasikara, tanindrazana iombonanana...
A� Raha misy eritreritra hanao zavatra ka tiana hahomby amina��ny zavatra atao. Fadio mandrakariva ny be hataka andro, fa ataovy miaraka amina��ny vava. Azo ambara fa tera-bary tsindrian-tsovoka��alina ianao amina��izay,A� tonga amina��ny maha diavolana��ny fonao. Be ny soa azo avy amina��io… Tahaka ilay Rafotsibe mandevina eranambatry, ka manan-kantenaina, vokatra��io fahazarana notefena taminao io. Tsarovy mandrakariva […]